जब कोरोनाको औषधि छैन,विश्व नै अनवरत रुपमा यत्रो समयदेखि लागिरहँदा पनि औषधि बन्न सक्दैन अनि पिसिआर टेस्टको हाउगुजी के को लागि हो? – Complete Nepali News Portal
जब कोरोनाको औषधि छैन,विश्व नै अनवरत रुपमा यत्रो समयदेखि लागिरहँदा पनि औषधि बन्न सक्दैन अनि पिसिआर टेस्टको हाउगुजी के को लागि हो?
शशि शर्मा आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नु हुन्छ :
मनमा लागेको कुरा !
-जब कोरोनाको औषधि छैन,विश्व नै अनवरत रुपमा यत्रो समयदेखि लागिरहँदा पनि औषधि बन्न सक्दैन अनि पिसिआर टेस्टको हाउगुजी के को लागि हो?
-जोरो आयो,टाउको दुख्यो, रुघाखोकी लाग्यो भने त्यसैको औषधि खाने हो कोरोनाको त हैन ! अनि पिसिआर परिक्षणमा करोडौं अरबौं खर्च गरेर के अर्थ छ ?
-लकडाउन र निषेधाज्ञाको नाममा जनतालाई आफ्नै घरमा बन्दी बनाएर रोजिरोटिको मेलोलाई अस्तव्यस्त गराउनुको अर्थ के छ?
-बिरामीलाई टेस्ट पोजेटिभ आयो भने महाअपराधी होला भनेझैं समाजले तिरष्कार गरेको छ,कतिले घरमै र कतिले अस्पतालमै देह त्याग समेत गरेका छन् । यसले कस्लाई फाइदा भयो त?
-कोरोना संक्रमीत भन्दा सयौं गुणा बढी जनता भोकभोकै मर्न थाले,त्यति नै संख्यामा मानसिक रुपमा बिछिप्त छन् । त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ?
-बरु कोरोनाको नाममा हुने लगानीलाई कृषिमा लगानी गरौं र लाखौं युवालाई स्वरोजगार बनाऔं ।
-औषधि नै नभएको रोगको परिक्षणको हाउगुजी देखाएर मुलुकलाई ठप्प पारेर जनतालाई भोक र शोकमा डुबाउनु अब चाहिँ गलत हुन्छ ।
-त्यसैले अब सरकारले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ ।